Waltajjii Maree Araaraa, Tokkummaa fi Oromoo Humneessu - OPride.com
Cuunfaa fi Ejjennoo Waltajjii Maree Araaraa, Tokkummaa fi Oromoo Humneessu Waldaa Artistoota Oromoon Qopha`ee:
Mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti araarri, nagaanii fi tasgabbiin akka jiraatuu fi Oromoo humneesuu akkasumas ABO tokkoomsuuf araaraa deemaa jiru deeggaruuf Caamsaa 29 , 2010 waltajjiin Maree Araaraa ,Tokkummaa fi Oromoo Humnessu Waldaa Artistoota Oromoon (WAO)n qophaa’ee gaggeeffame milkiin xumurame.
Waltajjii kana irratti hawwaasni Oromoo Minnesota fi naannoo isaa jiraatanii fi dhibba baayyeetti lakkawaman kan irratti argamanii irraa qooda fudhatan yoo ta’u, dhaaboleen siyaasaa fi jaarmayoonni Hawaasaa Oromoo kan naannoo Minneapolisii maadheffatanii jiranis waltajjii kana irraa qooda fudhatanii jiru.
Walgahiin kun eebba manguddotaan erga banameen booda, Dura Ta`aan WAO Obbo Amin Jundi hirmaatota walgahii irratti argaman baga nagaan dhuftanii fi dhaamsa WAO eega dabarsanii booda waligahiin tartiiba ka`amee itti fufe.
Bakka bu’oonni Waldaalee amantii sadan Sheik Hassan Safir, Luba Malkaamuu Nagarii fi Obbo Lammii Shunaa waldura dubaa Nagaa, araarii fi tokkumaan akka amantii isaanitti barbaachisaa fi murteessa Moraa Qabsoo bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo giddutti ta`uu isaa addeessan jiru.
Waldaan Dargaggoota Oromoos haala deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo kan calaqqisiisu agarsiisa Video gabaabaa dhaamsa guddaa barbaachisumaa araaraa fi tokkummaa jaarmayalee Oromoo fi ummata Oromoo qabu dhiheessan turan. Gama dhaabolee siyaasaa Dr, Fido Ebbaa, Obbo Leencoo Baatii fi Obbo Zelaalem Nagaasaa; haasaa walgahii kana irratti taasisan keessatti “ABOn gargar qoqqoodamuu fi gurmuun qabsaa’ota Oromoo laafachuurraa kan gargaarame diina qofaa akka ta’ee, inni kunis qaabsoo bilisummaa Oromoo gara boodaatti akka harkisee fi tokkummaa hawaasa Oromoo akka laaffise duubbatan. Rakkoo gidduu keenyatti uumamee waggoota kurnan darbaniif nu danqee ture hiikkachuu fi ABO tokkoomee hoggana tokkoon gaggeeffamu deebisnee argamsiisuuf haasaarra jirra’ jedhan. Bakka ba’aan HTBO Obbo Ismail Omar karaa isaan tokkummaan Moraa Qabsoo ABO hogganamuu qofaa osoo hint a`iin jaarmayolee Oromoo bilisa ta`anii bilisummaa Oromoof qabsa`aan hundaa keessatti ta`uu akka qabu dubbatanii jiru.
Hayyuu Seenaa Oromoo Obbo Buzuwarq Ballaa waa`ee nagaa, waliifdhisuu, araaraa, tokkummaa fi Oromoo Humneessuu fi barbaachisummaa Jaarmayaa Ummata irratti qorannoo godhan dhiyeessanii jiru.
Bakka bu’oonni Waldaa Maanguddoota Oromoo Minnisotaa Haajii Qaasim Hussein fi Hajii Bushuraa dhaamsa dabarsan keessatti “ABO bakka sadiitti gargar ba’uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan diige, gurmuu qabsa’otaa kan laaffisee fi irra darbee hawaasa Oromoo biyya alaa bara dheeraaf nagaa fi gammachuun walii wajjin jiraachaa ture afura isaa addan waan baaseef, deemsi araaraa amma ABO tokkoomsuuf deemaa jiru hatattamaan akka xumuramu gaafanna jedhan. Itti dabaluunis Qaamota araararra jiran sadan keessaa qaama araara kana dide, ykn akka araarri kun lafarra harkisatu taasise irratti akka maanguddoo Oromootti gad baanee ummata Oromootti iyyachuun qaama kana saaxila baasna jechuun akeekkkachiisa jabaa dabarsanii jiru.”
Bakka butuun dubartoota Oromoo Aadde Ertiryaa Namaraa gurmuun qabsaa’ota Oromoo deebi’ee ijaaramuu, araaraa fi tokkummaa barbaachisumaa isaa akka harmoolitti dhaamsa jaba dabarfatanii turan.
Waldaan Hawaasa Oromoo Canada-Ontario dhaamsa deegarsaa fi hawwii milka`iina walgahii qopha`ee eerganii jiru.
Yaada, gaafii fi deebii ta`e irratti hirmatonnii walgahii kana irratti argaman dhaamsaa fi ejjennoo armaan gadii kana irratti waliif galamee jira:
1. Hirmaattotni walgahii kanaas, Ummanni keenya biyya keessaa osoo hidhaa fi ajeechaan rakkachaa jiruu, Mooraan Qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo kamuu caalaa har’a osoo laafachaa jiruu araara kanaaf yeroo kennuun sirrii akka hin taane jala sararuun itti dabalaniis araarri kunis nurraa jalqabuu qaba, hawaasa keenya yaadni hiramee, duumsa qoodamiinsaan golgamee jiru irraa jalqabuu qaba. Kanaafa har’a baayyeen keenya waggaa lama keessatti, gariin keenyas waggaa kudhanitti yeroo jalqabaaf waltajjii tokko irratti waltti dhufnee yaada eebbifamaa kanaaf gahee keenya ba’aa jirra fi waltajjiin akkanaa fi kan kana fakkata fuladuraaf qopha`ee yaada keenya waliif dabarsu qabnna irratti waligalame.
2. Qabsoon Bilisummaa Oromoo galii isaa ga’uu kan danda’u, mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wal dhabiinsi jiru furamee, qabsa’onni Oromoo ija isaanii wal irraa kaasanii diina irra yoo ka’an qofa. Inni kun akka ta’uuf dhaabonni Oromoo of qusannaa tokko malee akka irratti hojjetaniif dhaamsa keenya dabarsinaa, araarri kunis akka fiixa ba’uuf dhiibbaa barbaachisaas irratti goona, deegarsa barbaachisa illee ni gona.
3. Warra araaraa fi tokkummaa Moraa Qabsoo Bilisummaa ABO keessatti deemaa jiru dura dhabatuu fi duubatti harkisuu ni balaleeeffanna, akka hawaasatti illee bira hin dhabannu. Warra araaraa fi tokkummaa didaan saxila baasuun warra araaraa fi tokkummaa uumuun Oromoo humneessuun qabsoof bobbbasan bira dhabachuuf qophii dha.
4. Sababa har’a mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti qoodamee jiruuf tokkummaa hawaasa Oromoo irratti duumessi qoodamuu aguugamee jiru akka ka’uu fi araarri kun fiixa akka bu’uuf of qusannaa tokko malee hojjechuu qabna, isa kanas ofirraa jalqabuu qabna.
5. Mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABOn hogganuma keessatti araarri bu’ee, qabsa’onni Oromoo yaada tokkoon diina irratti xiyyeefachuu, aadaa wal danda`anii waliin hojjechuu horuun humna tokkomee fi hogganaa itiitaan bilisummaa ummatii Oromoo hawwuun gahuuf dhaamsa dhiyatee bakka bu`oon ABO fudhachuun akka hojjatan waada galuun akkasumas tokummaa kana daraan dhaabolee Oromoo walaba ta`aan hundaa waliin uumuu akka qaban dhaamsa hawaasi dhiyeesse irratti akka hojjatan waada galanii jiru.
6. Hawaasi Oromoo garaagarummaa ilaalcha siyaasaan osoo addan hin qoodamin waan waloo isaa ta`ee irratti bu`ura isaa Oromummaa irratti hunda`uun waliin hojjachuuf qophii ta`uu isaa adeesse jira. Akkasumas amman booda rakkoo jaarmaayolee siyaasa keessatti uumamuuun tokkummaan keenya gaga`uu hin qabu irratti ummati waligalee jira.
7. Hawaasi Oromoo biyya alaa Jaarmayoota Ummataa (Civic Organizations) jajaboo kan Oromoota hundaa walitti fiduun rakkoon yoo jaarmayoota siyaasa keessatti illee dhalatee to`achuu fi hiikuu danda`aan qabachuun murteessa ta`uun isaa waliif galamee, akkasumas jarmayoota akkasi jabeesuu fi ijaarachuun barbaachisa ta`uu irratti yaadii dhiyaatee jira.
8. Waltajjii maree WAO qopheesse kun akka bakka adda addaa hawaasii Oromoo itti heddumatutti itti fufu dhaamsa dhiyatee WAO Araaraa, Tokkummaa fi Oromoo humnessuu irratti karaa barbaachisaa ta`ee hundaan jaarmayoolee Oromoo ta`an hundaa wajjin hojjachuuf waada galee jira.
Walgahii kana booda galgaluma sana Artistootni Oromoo Canada fi USA keessa walitti dhufanis waggaa lama keessatti yeroo jalqabaaf afuuraa fi yaada tokkoon faaruu qabsoon ummata bashanansiisaa bulan.
Walgahii kanas Waldaa Artistoota Oromoo waliin ta’uun kan qopheessan Waldaa Hawaasa Oromoo Minnesota, Waldaa Dargaggoota Oromiyaa, Tokkummaa Waldaa Baratoota Oromoo, Gumii Lammiwaan Oromoo Amarikaa, Waldaa Dargaggoota Oromiyaa Addunyaa, Opride.com fi Gadaa.com dha.
Waldaa Artistoota Oromoo
Caamsaa 29, 2010